Challenge The Good News Paper - Rudo runokunda hasha (Shona)
Lena nayewo, nekuda kwemakuriro ake akawawo munhu ane hasha uye asina rudo.
Akazowaikwa asi anoti aishungurudza murume wake zvikuru uye akange asiri mudzimai akanaka.
Lena anoti "Ndaiva mudzimai ane godo, ane hasha, asinga terere uye asina rudo." Zvisineyi murume wake ainzwisisa hupenyu wemudzimai wakenaizvozvo haana kuvhundutswa nazvo.
Pakazova nevana vakewo Lena akayeuka kuti aisatarisira kuti vana vake vakure nenzzira yaakange akura nayo, yekusaziva rudo, akatanga kutswagurudza zvakanga zvakanganisika muupenyu wake.
Panguva iyoyo akanga achishandira kambani yaiita zvokutsikisa mapepa uko shamwari dzake dzaigaro muudza nezverudo rwaMwari uyo akatuma Jesu kuzofira zvivi zvedu.
Lena anoti, "Shamwari dzangu dzaindiudza kuti pandingotenda nokugmuchira Jesu, hupenyu hwangu hwaizo Shanduka." Asi zvakazoitika kwapera nguva refu pagungano rokuparidza apo Lena akazvipira hupenyu hwake kunaJesu.
Lena anoti "Mufundisi wangu akadonedza misodzi apo mudzimai wake aindinamatira, ipapo ndakava ndaziva kuti paiva nazvaiitika kwandiri." Murume wake pamwe nevana vakava vazvipirawo kuna Jesu kuti ava Ise nemuponesi wavo.
Lena anoti Mwari vakabata zvikurumuupenyu wake zvokuti akanzwa achida Mwari zvikuru, zvisinei dambudziko rehasha kupera pakarepo. Lena anoti "Zvakatora kutenda mushoko raMwari kukuru kuti ndidzikinurwe kubva mudambudziko rehasha, ndakaverenga Bhaibheri zvikuru, kunyanya ndima inoti 'Zvino kana Mwanakomana akakusunungura, uchasununguka kwazvo kwazvo.' (Johani 8:36)"
Lena akaregererawo amai vake nokuti akanga oziva kuti shoko raMwari rinoti munhu wose aakatadzira Mwari uye anoda rudo rusina makodzero uyewo nokuti mai vake vange vasingazive kuti vogamuchira sei dambudziko rakanga ravawira.
Kubva muchimiro chokuva munhu ane hasha, asina rudo, Lena ava munhu akazadzwa norunyararo pamwe nerudo rwaMwari kunavamwe. Anonyanyo farira ndima inoti "Ngatidananei, nokuti rudo runobva kuna Mwari...nokuti Mwari ndirwo rudo" (1 Johani 4:7-8).•
<< Uthando lunqoba intukuthelo (Zulu)